SDBA (Sochi Demokraatawaa Biyyoolessa Amhaara) - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 14:32 9 Fuulbaana 202114:32 9 Fuulbaana 2021
Finciltoonni Tigraay Affaar keessaa mo'amanii bahuu mootummaan hime, TPLF mo'amnee miti jedha
Bakkeewwan Naannoon Affaar Naannoo Tigraay daangessutti seenanii kan turan finciltoonni Tigraay mo'amanii naannichaa bahuu isaanii mootummaan hime. Dubbii himaan TPLF bakkeewwan kanaa bahuu mirkaneessaniis mo'amanii akka hin taane ibsan.
...tti maxxanfame 12:12 8 Fuulbaana 202112:12 8 Fuulbaana 2021
Haleellaan kun tibba naannoon kun to'annoo TPLF jala turetti ta'uu fi haleellaa kanaanis daa'imman, jaarsolii, dubartoonniifi luboonni ajjeefamuu jiraattonniifi qondaaltonni mootummaa dubbataniiru. Haa ta'u malee, TPLF ibsa baaseen ajjeechaa keessaa hin qabu jechuun waakkate.
...tti maxxanfame 4:22 6 Fuulbaana 20214:22 6 Fuulbaana 2021
'Ijoollee qabannee holqa keessa jiraataa jirra' - Jiraattota Lixa Tigraay
Jiraattoonni Humaraa, Adbaayi, Idiriis, Qaaftaa Humaraa fi ganda Dagaguum kan amma to'annoo Naannoo Amaaraa jalatti argamu keessa jiraatan miidhaan saalaa, hidhaan fi ajjeechaan jumlaa saba irratti xiyyeeffate raawwatamaa jira jechuun BBCtti himan.
...tti maxxanfame 8:29 4 Fuulbaana 20218:29 4 Fuulbaana 2021
Alaabaan sadi naannoon Amaaraa filannoof dhiyeessee maal ibsu?
Bulchiinsi Mootummaa Naannoo Amaaraa alaabaa naannichaa kan durii guutummaatti jijjiiruun haraa labsuuf filannoowwan sadii dhiyeesserratti yaada uummataa gaafate.
...tti maxxanfame 4:13 17 Hagayya 20214:13 17 Hagayya 2021
'Hawaasni idil-addunyaa ummanni qe'ee isaarraa osoo buqqa'aa jiru callise' - Naannoo Amaaraa
Lola bakkeewwan naannoo Amaaraa Tigraay daangeessutti adeemaa jiruun rakkoo dhaqqabaa jiru hawaasni idil - addunyaa osoo dhagahuu callisuu filateera jechuun qondaalli olaanaa Naannoo Amaaraa himan. BBC'n Pirezidantii I/Aanaa naannichaa Dr Fantaa Maandafiroo waliin turtii taasiseera.
...tti maxxanfame 8:49 28 Ebla 20218:49 28 Ebla 2021
Naannoo Amaaraatti komishinariin poolisii haaraa muudaman
Komishinii Poolisii Federaalaatti Komishinara Itti-aanaa kan turan Tekollaa Ayfokkiruu Komishinii Poolisii Naannoo Amaaraa akka gaggeessaniif muudaman.
...tti maxxanfame 10:06 2 Ebla 202110:06 2 Ebla 2021
"Nuti yeroo yeroon ibsa gaddaa baasuun nu nuffisiiseera" - Aganyawu Tashaagar
Mootummaan federaalaa Itoophiyaa ajjeechaa fi buqqa'iinsa dhalattoota saba Amaaraa irratti fuulleffate ariitiin akka furu pireezidantiin naannoo Amaaraa Obbo Aganyawu Tashaagar waamicha dhiyeessan.
...tti maxxanfame 7:57 23 Bitooteessa 20217:57 23 Bitooteessa 2021
Haleellaa naannoo Amaaraa Waag-himraatti lubbuu nama 70 olii galaafate
Naannoo Amhaaraa bulchiinsa godina saba Waagimraa keessatti haleellaa torbee darbe Bitooteessa 18, 2021 raawwatameen namoonni baay'een yoo ajjeefaman, kaan irra ammoo miidhaan qaqqabuu aanga'oonni naannichaa fi jiraatoonni BBC'tti himan.
...tti maxxanfame 5:07 23 Bitooteessa 20215:07 23 Bitooteessa 2021
Paartiin Oromiyaa bulchu hidhattoota naannoo Amaaraa 'yakka waraanaan' himate
Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa godina addaa Saba Oromoo keessatti lubbuu namoota nagaa galaafate ka'umsi isaa finxaaleessummaa fi shira siyaasaati jedhe Paartiin Badhadhinaa Oromiyaa.
...tti maxxanfame 6:42 14 Bitooteessa 20216:42 14 Bitooteessa 2021
Naannoon Amaaraa alaabaa naannichaa maaliif jijjiiruu barbaade?
Guyyaa kaleessaa, Sambata, Manni Maree Naannoo Amaaraa labsii alaabaa naannichaa jijjiiruuf qophaa’e raggaasiseera. Seenaan dudduubee alaabaa kana jijjiiru maali?
Page 1 Keessaa 4